Mkpegharị nkwụsịtụ Amazon: ihe ị ga -eme mgbe nkwụsị onye na -ere ahịa Amazon
Emela na ihe ị ga -eme mgbe nkwụsịtụ akaụntụ onye na -ere ahịa Amazon
Amazon maka ndị na-ere ntanetị bụ mecca dị nsọ. Na, ọ na-emekwa otu ihe ahụ ndị ahịa. Enwere ụdị na ngwaahịa dị iche iche nke mmadụ nwere ike ịzụta. Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị na-ere ahịa n'elu ikpo okwu na-enye nnukwu ngwaahịa, ọnụ ọgụgụ nke arịrịọ nkwụsịtụ Amazon gbakwara elu.
Nke a mere n'ihi na ogo ngwaahịa na ikpo okwu belatara ma ọnụọgụ nke ndị ahịa na-enweghị obi ụtọ mụbara. Iji jide n'aka na ndị ahịa Amazon nwere ihe kachasị mma n'ịntanetị, Amazon na-agba mbọ inwe ndị na-ere ahịa dị mma. Amazon na-eme nke a site na itinye iwu ndị na-ere n'elu ikpo okwu. Na, ọ bụrụ na ọ naghị egwuri egwu site na ha mgbe ahụ ha kwụsịtụ akaụntụ ha. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị na anyị bụ ụlọ ọrụ na-enyere ndị nọ n'ụdị mkpa a aka.
Ọ bụ ezie na, ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na isiokwu a, m ga - adụ gị ọdụ ka ị gụọ n'okpuru maka mkpesa nkwụsịtụ Amazon, yana otu anyị si enyere ndị mmadụ aka na akaụntụ ndị a kwụsịtụrụ.
Kedu ihe Nkwụsị Akaụntụ Amazon pụtara?
Site na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu, enweela ọtụtụ ihe merenụ nke nkwụsịtụ ndị na-ere ahịa Amazon. Dị ka o kwesịrị, enwere ike ịnwe ọnọdụ atọ nke onye ahịa Amazon nwere ike ịgafe. Ndị a bụ:
Nkwusioru: Ọ bụrụ na ịkwụsịtụrụ akaụntụ gị nke ahụ pụtara na ị nwere ike ịme ịrịọ nkwụsịtụ Amazon. Nke a pụtara n’ezie na ọ dị mkpa ka ị chepụta ihe ị ga-eme.
Ajụrụ: Nke a pụtara na onye na-ere ahịa emeela arịrịọ nkwusio Amazon mana ndị ikike jụrụ ya. N'okwu a, mmadụ ga-ewepụta atụmatụ a ga-emezigharị.
Machibidoro: Nke a bụ isi nke nloghachi. Enweghị arịrịọ ịkwụsịtụ nwere ike ịchekwa gị ma ọ bụrụ na amachibidoro akaụntụ gị.
Enwere ike ichikota Nkwusi Amazon na nke mbu. Ọ bụrụ na ejiri akaụntụ gị kwụsị ma ọ bụ jụ arịrịọ gị. Ọ pụtara na Amazon chọrọ ka ị mee mgbanwe ụfọdụ ma melite ọrụ gị.
Mana, ọ bụrụ na amachibidoro gị n'elu ikpo okwu nke bụ mpaghara gbara ọchịchịrị mgbe ahụ enweghị nloghachi. Mmadu nwere ike iche na imeghe akaụntụ ohuru mana nke ahụ megidere iwu nke Amazon. Nke a pụtara na enweghi ezigbo ụzọ iji weghachite akaụntụ gị. Agbanyeghị, nke a na-eme naanị maka ọrụ kacha njọ. Yabụ, ọ bụrụ n'amaghị ama na akaghị aka a mgbe ahụ ohere bụ na ị gaghị eru ọkwa ahụ. Na na nwere ike n'ezie ofu iji ihe dị irè Amazon nkwusio mkpesa.
Kasị Common Ihe mere maka Amazon kwụsịtụ
Ọ bụrụ na anyị amalite ịgụ usoro & ọnọdụ nke Amazon mgbe ahụ ọ ga-ewe oge na nnukwu ọgba aghara. Amazon ịbụ nnukwu ecommerce n'elu ikpo okwu na-arịọ ịgbaso ọtụtụ iwu na ụkpụrụ. Nke a bụ ihe kpatara na ọnụọgụ nke arịrịọ ịkwụsịtụ Amazon na oge ịrị elu. N'ezie, anyị ejirila anya anyị na-ahụ ịrị elu nke ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-abịakwute anyị maka mkpesa nkwụsịtụ Amazon. Ọ bụrụ na anyị na-aga site na obere akwukwo nke Amazon mgbe ahụ enwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara ya. Mana, enwere ike ime ka ọ dịkwuo na atọ:
Ihe kachasị kpatara ya bụ imebi iwu ndị Amazon gwara gị ka ị soro. Ọ bụrụ na ịnọghị na-arụ ọrụ mgbe ahụ, enwere ike ịnwe iwu.
Azụmaahịa gị na-amaba miri emi. Amazon achọghị ị nabata ndị na-ere ahịa nwere ahịa adịghị mma. Ọtụtụ mgbe, enwere ezigbo ihe kpatara nke a ji eme? Ma ọ bụrụ na ị maara banyere ya wee gbaa mbọ hụ na idozi ya.
Na-ere ngwaahịa nke anaghị anabata n’elu ikpo okwu. Nke a nwekwara ike ime na ngwaahịa ndị na-emebi Iwu Google.
Gụọ kwa: Ihe Mgbasa Ozi Akwụmụgwọ Amazon
Kedu ka anyị si achọta isiokwu nke nkwusioru Amazon?
Na-enweghị agba isi anyị ebe a na ebe ahụ, ụzọ kachasị mma iji mee nke a bụ site na ịlele ọkwa nke Amazon zitere. Ọ bụrụ na ejiri akaụntụ gị kwụsịtụrụ maka oge izizi ị nwere ike ị gaghị elebara ya anya. Ma, Amazon na-agba mbọ igosipụta mmejọ gị na ọ bụ ebe ahụ ka anyị na-anwa inyere aka.
N'ihe karịrị site na nkwupụta nke Amazon zitere, anyị na-amalite ọrụ anyị iji mepụta akaụntụ ndị na-ere gị ihe arịrịọ Amazon kwadoro.
Kedu otu esi egbochi nkwụsị akaụntụ Akaụntụ Amazon?
Ide ederede arịrịọ nke Amazon bụ mkpọtụ na-enweghị isi mgbe mmadụ nwere ike ịnọ naanị nkwụsịtụ. Anyị bụ ndị ọrụ nkwusioru nkwusioru Amazon mana anyị na-enyekwa ndị ahịa anyị uru nke mgbochi mgbochi.
Inweta akaụntụ gị kwụsịtụrụ ma weghachite ya nwere ike iyi ihe nkịtị. Mana, gini na - eme ma ị tufuo azụmahịa gị maka ụbọchị ole na ole ahụ. N'ezie, nke a nwekwara ike imebi ntụkwasị obi gị na ogo ngwaahịa na sistemụ ahụ. E wezụga na ụlọ ahịa gị maka oge a na-emechi nke pụtara na ị naghị enweta ego ọ bụla.
Anyị na-elezi anya na mmemme gị na ikpo okwu ma na-eduzi gị. Anyị na-anwa ka a ghara ijide gị na omume ọ bụla na-emebi obi, ma ọ ga-ama ama ma ọ bụ n'amaghị ama. Tụkwasa m obi, ọtụtụ ndị ahịa na-eche na ha nwere ike ịme ọgbaghara ma were mmadụ dịka anyị. Mana, ọ naghị arụ ọrụ ọ bụla n’ụzọ anyị chọrọ ọkachasị ma ọ bụrụ na onye ahịa a na-ekwughachi otu ihe ugboro ugboro. Anyị na-ejide n'aka na ị nọghị n'ihe ọjọọ ma debe usoro egwu ka ahụike ahụike nke onye na-ere na-akwagide ma ndị ahịa zere mkpesa ọpụpụ Amazon ọ bụla.
Kedu ka anyị si emepụta atụmatụ ime ihe ahaziri maka nkwusioru Amazon?
Enwere ihe ole na ole ekwesiri ime n'onwe gị. Dịka ọmụmaatụ, ịlele ọkwa nke Amazon zitere na nkwusioru. Na-enyocha ndị na-ere ihe metrik iji hụ ka akaụntụ gị si arụ ọrụ n'oge a.
Ka anyị mee ka ohere anyị dị mma ma mepụta nke ọma Atụmatụ ime ihe (POA), anyị na -agbalị ịdị ka o kwere mee. Na, anyị na -agbalịkwa ịrịọ mgbaghara, ọ bụ isiokwu nwere ike ịdị ike n'ezie.
Anyị emeela nke a oge dị mma. Anyi n’achota ihe nile enyere anyi, gbalita ime atumatu na-eji ihe ndi a bu ihe ndi ozo:
Anyị n’aha gị na-ahụta maka mfu ọ bụla mebiri. Ma ọ bụ n'elu ikpo okwu ma ọ bụ ndị ahịa ma ọ bụ abụọ.
Gbalịa ịse foto ebe anyị na-eme ka ha chee na ọ nwere ekele ịnwe ikpo okwu dịka Amazon. Ma, ọ bụ n'ezie ohere anyị na-agaghị achọ ịme ọgbaghara.
Akatọla ndị ọzọ na-ere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha. Amazon na-ewe ya oge ruru ma kwụsịtụrụ onye ọ bụla na-emebi iwu.
Dị ka anyị kwuru “mgbaghara” bụ isiokwu.
Ndụmọdụ Ndị Ọzọ Dị Mkpa
Ndị a nwere ike ịdị ka otuto ma tụkwasị m obi na ọ bụ eziokwu niile n'echiche dị mma. N'ezie Amazon enyela ọtụtụ mmadụ ikpo okwu maka ịzụ ahịa n'eziokwu. Ọ na - enye ndị chọrọ oke ohere azụmaahịa ha kacha mma. Ike iresị ndị ahịa ibe gị ihe ọ bụla bụ ihe ọ bụla chọrọ. Ma ugbua ọ bụ eziokwu kama inwe ekele, ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-anwa iji ya mee ihe maka ebumnuche dị mkpirikpi.
Ọfọn, ozugbo anyị chịkọtara data niile iji wuo ezigbo arịrịọ nkwusio Amazon, anyị anaghị eme ọsọ ọsọ. Ọ dị mkpa na ihe ọ bụla a na-ezigara Amazon bụ nke kachasị mma. Nke a nwere ike iyi obere enyo ma nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị na-atụ uche gị na mbụ mgbalị mgbe reinstatement nwere ike n'ezie were a dum ọtụtụ oge.
Ihe ndị ọzọ dị mkpa anyị ji wee rụọ arịrịọ nkwusioru Amazon kwesịrị ekwesị:
Anyị na-anwa naanị ikwu maka atumatu na ihe bụ ikike anyị. Enweghị ihe mere ị ga-eji kwuo maka metrik arụmọrụ mgbe akwụsịtụrụ gị. Ọbụlagodi na ị na-enye ọnụọgụ ọkụ, ọ pụtaghị ihe ọ bụla ọkachasị ma ọ bụrụ na nchegbu dị iche.
Anyị na-agba mbọ hụ na leta ahụ anyị zitere abụghị nke ogologo. Ogologo ọdịnaya na-ewe oge igwu ala ma yabụ dị mkpụmkpụ ma sie ike bụ ụzọ kachasị mma iji dee akwụkwọ mkpesa nkwụsịtụ Amazon.
Kama iji paragraf dị ogologo nke nkọwa, anyị na-anwa ịhazi amazon nkwusioru arịrịọ anyị na-eji isi akara na nọmba. Nke a nwere ike iyi ka obere azụmaahịa mana ọ na-eme gị amazon mkpesa ụzọ ọzọ scannable ka họpụtara ọkachamara Amazon.
Anyị na-anwa izere ozi ndị ọzọ ọ bụla ma lekwasị anya naanị n'okwu ahụ enyere ndị ahịa. Nke a anaghị achụpụ uche na-enweghị isi ebe ọzọ.
Mmalite nke ọrụ anyị bụ nsogbu dị ugbu a. Kama igwu onye ọ bụla egwuregwu ụta, anyị na-ahụ na Amazon maara na anyị ghọtara mmejọ anyị na anyị ga-edozi ya ASAP, ma ghara ịmeghachi ya ọzọ.
Isi ego ọzọ, anyị na-ejikarị eme ihe bụ ide paragraf mmeghe na-akọwa ihe niile kacha mkpa. Nke a nwere ike iyi ntakịrị ntakịrị karịa mana ọ na-arụ ọrụ dị ka anwansi. Ndị a bụ ndụmọdụ bara uru mgbe ị na-eme mkpesa nkwụsịtụ Amazon. Na, ọ bụ n'ozuzu usoro anyị na-egwu n'ime mana ọ dị mkpa iburu n'uche na naanị nsogbu dị na aka ga-ekpebi etu a ga-esi mesoo ya.
Kedu ihe kpatara anyị ji atụ aro ndị na-ere ere ka ha gaa ọkachamara maka ịrịọ nkwụsi ike?
Nke a, nke a nwere ike iyi obere ihe egwu mana mmetụta uche nwere ike ịbụ otu nnukwu ihe mere iweghachi gị nwere ike iji were ogologo oge. Anyị na-ezute ndị ahịa kwa ụbọchị bụ ndị jiri obi eziokwu na-arụ ọrụ n'elu ikpo okwu. N'agbanyeghị nke ahụ, a kwụsịrị akaụntụ ha n'ihi na ha amaghị ma ọ bụ na ọ naghị arụ ọrụ nke ọma na ngalaba a.
N'ezie, anyị nwere ike ịgwa gị gbasara ndị ahịa na-ezere ozi Amazon maka na ha ga-akwụsị ire otu n'ime ngwaahịa ha n'ihi nyocha ndị ọrụ. Ọ bụ ezie na tupu ha emee ihe ọ bụla, Amazon kwụsịrị akaụntụ ha.
Enwere ọtụtụ mmadụ n’elu ikpo okwu nke nyegoro nnukwu oge maka iwulite azụmaahịa ha. Inweta ya niile n'otu ntabi anya nwere ike ịbụ ọtụtụ maka ọtụtụ. Na, ọ dị mkpa ijide onwe gị. Na, na mgbakwunye na ịbụ ndị otu nzaghachi mbụ gị na nkwụsịtụ, anyị na-ahụ na ị kwụsịghị na mbụ. Anyị @ APlus Global Ecommerce kwenyere na anyị bụ ndị mmekọ na ndị ahịa anyị n'oge mkpa. Ha azụmahịa na-aga nke ọma bụ ihe ịga nke ọma anyị.
Ndụmọdụ anyị kachasị mma iji zere ide akwụkwọ Nkwado Amazon
Ee, anyị bụ ọrụ na anyị nwere mmasị ịzụ ahịa. Mana, nke a apụtaghị na anyị ekwesịghị ịnwa inyere ndị ibe anyị Amazon Sellers aka. Anyị nwere ike ịnwe ọrụ dị iche iche mana anyị ghọtara nsogbu gị. Ma ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ ọrụ ebe ahụ, onye ọ bụla na-eche echiche nke inye ihe ngosi dị mma n'ịgbalị ịrịọ maka onwe ha. Enwere ọtụtụ ihe enwere ike ikwu mana ọ ka mma iji zere nkwusioru ọ bụla. Iji mee nke a, enwere ụfọdụ ihe ị kwesiri iburu n’uche.
Zere ire ụdị ihe ọ bụla amachibidoro.
Enwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa nwere ike ịme ya mana nke a apụtaghị na ị kwesịrị. Amazon na-agwa ndị na-ere ya okwu megide nke a. Ya mere, ọ dị mkpa ka ị gee ntị nke ọma ma ọ bụrụ na ịchọrọ izere mkpesa nkwụsịtụ Amazon.
Gbalịa izere ire
ngwaahịa ndị nwere ike iyi ka ị na-eche gị. Ọ bụrụ na ngwaahịa ị na-ere dị ka n imomi nke ụfọdụ ngwaọrụ ma ọ bụ arụmọrụ ya, gbalịa ịmata mgbọrọgwụ nke ngwaahịa ahụ. Enwere ọtụtụ ndị na - akwụsịtụ akaụntụ ha n'ihi atumatu ịda iwu IP. Nke a bụ otu n’ime isi ihe mere ọtụtụ ndị na-ere ahịa ji kwụsịtụ akaụntụ ha.
Kpoo onye oka iwu.
N'ezie ịzụ ahịa na-egosi na ị nwere ike ire karịa otu ngwaahịa. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ị na-eche ihe ọ bụla na-adịghị mma banyere ngwaahịa ị na-ere ma chọọ ime nke ahụ ị nweta ndụmọdụ bụ ihe kachasị mma ị nwere ike ime.
Zere ịkọwapụta nyocha gị.
Nyocha banyere Amazon bụ isi ihe ngosi nke ogo ngwaahịa gị. Amazon achọghị ka ị gbalịa ịgbanwe ha n'ụzọ ọ bụla. Ọ dị mkpa ka ị were nyocha ndị ahụ rụọ ọrụ nke ọma wee bido imeziwanye ọrụ gị site na irubere ha isi. Nyocha ndị ahịa bụ nke mbụ ebe mmadụ nwere ike ịchọ ezigbo nkatọ na otuto. Ma ọ bụrụ na ị daa ime nke ahụ ị nwere ike ịnabata mkpesa nkwụsịtụ nke Amazon.
Kwusi ntụkwasị obi na nkọwa gị.
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-akọwa ngwaahịa ha n'ụzọ dị iche iche ebe ngwaahịa ahụ adịghị elu na nkọwa ahụ. Ọ bụrụ na Amazon na-enweta ọtụtụ mkpesa banyere mgbe ahụ ị nwere ike ịnabata ihe Mkpesa nkwusioru Amazon.
Inweta mkpesa nkwụsịtụ Amazon nwere ike ịbụ nhụsianya kachasị njọ nke mmadụ nwere ike ịgafe. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweghị ike idozi ọnọdụ ahụ, ị ​​nwere ike ịrịọ anyị ka anyị kwado gị. N'ihe gbasara afọ, anyị ka bụ nwa ọhụrụ mana n'ihe gbasara ahụmịhe, anyị nwere ụfọdụ ndị ọkachamara kachasị amachibidoro nkwanye ugwu Amazon. Ndị ọrụ anyị nwere ahụmahụ miri emi na niche ma nwee ọtụtụ afọ nke ahụmahụ n'ọhịa. Ewezuga nke ahụ Aplus Global Ecommerce awade ọzọ ọrụ dị ka mgbochi nkwusioru, nyocha ahụike akaụntụ, nkwalite ahịa, wdg, yabụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ ọkachamara iji kwado gị mgbe ahụ anyị nwere ike ịnwe enyemaka. Anyị nwere olile anya na nke a nwere ike bụrụrịrị enyemaka ụfọdụ nye gị. Ọzọkwa, daalụ maka ịgụ ya ruo ọgwụgwụ.